Not Copyrighted ရဲ့အမိုက်စား Fashion Show ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အဲလက်စ်အုန်း - Zeekwat Hot News
အဖြူရောင်သတိုးသမီးဝတ်စုံလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကြွေဆင်းသွားစေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ၀တ်မှုံ... October 14, 2019
တစ်နေ့တစ်ခြား လှလာပြီး အနုပညာအလုပ်တွေပြန်လည် လုပ်ကိုင်လာတဲ့ မင်းသမီးလေး သွန်းဆက်... October 14, 2019
မီးပန်းဖောက်ဖို့အတွက် ကလေးလေးလိုပျော်ရွှင်နေတဲ့ အဆိုတော် ပိုပို... October 14, 2019
သီတင်းကျွတ်မှာ ပရိသတ်ကြီးကို ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်တဲ့ မင်းသားချော အောင်မင်းခန့်... October 14, 2019
ဆက်ကျော်သက်လေးလို ချစ်စဖွယ် ၀တ်စုံလေးနဲ့ Bella ပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချေ... October 14, 2019
Not Copyrighted ရဲ့အမိုက်စား Fashion Show ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အဲလက်စ်အုန်း
September 10, 20190393
မော်ဒယ် သရုယ်ဆောင် အဲလက်စ်အုန်း ဟာဆိုရင် တိုင်းရင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မော်ဒယ်လောကမှာ အောင်မြင် နေတဲ့သူတစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ တိုင်းရင်းသူဖြစ်တဲ့ အဲလက်စ်အုန်း ဟာလှပတဲ့အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကို မော်ဒယ်တစ်ဦးပီသစွာ Style ကျကျဝတ်တတ် ပြီးလဲ ချစ်စရာကောင်းပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သူမက အားကစား တွေလဲ လိုက်စားလေ့ရှိပါတယ်။
Photo Paing Thaw
အနုပညာကို ၀ါသနာပါတဲ့ သူမရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကြောင့် ယခုဆိုရင် မော်ဒယ်လောက အောင်မြင်နေတဲ့ သူတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲလက်စ်အုန်း ဟာဆိုရင် သူမရဲ့ စတိုင်ကျကျ ၀တ်ဆင်တတ်လေ့ရှိတာတွေ လူငယ်ပီပီ အထာကျကျ Fashion ၀တ်လေ့ ရှိ တာတွေကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အဲလက်စ်အုန်း ဟာဆိုရင် ပရိသတ်ရင်ထဲကို MTV တွေမှာကော ကြော်ငြာတွေရိုက်နေ သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပွဲအခမ်းအနားတွေမှာလဲ ဖြစ်စရာကောင်းစွာ တွေ့မြင်ရသူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ တွေတော်တော်များမှာလဲ ရိုက်ကူးမှုတွေရှိနေပြီး “လေဆန်တိုးတဲ့ ကကြိုး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်းနဲ့ အခြားသရုပ်ပေါင်းများစွာနဲ့ အတူပါဝင်သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်နော်။
အဲလက်စ်အုန်းက ယနေ့မှာ “လူတိုင်းက ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့အရာက်ု အမြဲဦးစားပေးမှာပဲ 🖤 မင်းအတွက်ကော ကိုယ်ကအေ ရးကြီးတဲ့ သူဖြစ် ခဲ့လား ဖြစ်နေလား ဖြစ်လာမှာလား!? 🖤” လို့ဆိုထားပါတယ်။ လတ်တလောမှာ အဲလက်စ်အုန်း တစ်ယောက် Not Copyrighted Fashion Show အခမ်းနားပွဲကို တက်ရောက်တဲ့ အမိုက်စား Fashion ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲလက်စ်က Fashion တွေကို စတိုင်ကျကျဝတ်လေ့ ရှိတာကြောင့် မိန်းကလေးတိုင်း ဖက်ရှင်ကျအောင် ဘယ်လိုဝတ်ဆင် သင့်လဲဆိုတာ သိရှိဖို့အတွက် သူမရဲ့ ၀တ်ဆင်ပုံတွေကို လေ့လာလျှင် ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်နော်။ အနုပညာရှင် တွေရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို သိရှိခံစားနိုင်အောင်လို့ ဇီးကွက် Page လေးကို Like လုပ်ထားဖို့ ပြောခဲ့ပါရစေနော် .….……။
Source Alice ong
Not Copyrighted ရဲ့အမိုကျစား Fashion Show ကိုတကျရောကျခဲ့တဲ့ အဲလကျဈအုနျး
မျောဒယျ သရုယျဆောငျ အဲလကျဈအုနျး ဟာဆိုရငျ တိုငျးရငျးတဈဦးဖွဈပွီး မျောဒယျလောကမှာ အောငျမွငျ နတေဲ့သူတဈဦးလဲ ဖွဈပါတယျ။ တိုငျးရငျးသူဖွဈတဲ့ အဲလကျဈအုနျး ဟာလှပတဲ့အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျကို မျောဒယျတဈဦးပီသစှာ Style ကကြဝြတျတတျ ပွီးလဲ ခဈြစရာကောငျးပါတယျနျော။ မျောဒယျတဈဦးဖွဈတဲ့ သူမက အားကစား တှလေဲ လိုကျစားလရှေိ့ပါတယျ။ အနုပညာကို ဝါသနာပါတဲ့ သူမရဲ့ ကွိုးစားမှုတှကွေောငျ့ ယခုဆိုရငျ မျောဒယျလောက အောငျမွငျနတေဲ့ သူတဈဦးအဖွဈ ရပျတညျနတော တှရေ့ပါတယျ။ အဲလကျဈအုနျး ဟာဆိုရငျ သူမရဲ့ စတိုငျကကြ ဝတျဆငျတတျလရှေိ့တာတှေ လူငယျပီပီ အထာကကြ Fashion ဝတျလရှေိ့တာတှကွေောငျ့ မိနျးကလေး ပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံစိုကျမှုကို ရရှိသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။ အဲလကျဈအုနျး ဟာဆိုရငျ ပရိသတျရငျထဲကို MTV တှမှောကော ကွျောငွာတှရေိုကျနေ သူတဈဦးဖွဈပွီး ပှဲအခမျးအနားတှမှောလဲ ဖွဈစရာကောငျးစှာ တှမွေ့ငျရသူလဲ ဖွဈပါတယျ။ ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ တှတေျောတျောမြားမှာလဲ ရိုကျကူးမှုတှရှေိနပွေီး “လဆေနျတိုးတဲ့ ကကွိုး” ရုပျရှငျဇာတျကားမှာ သရုပျဆောငျ ဒေါငျးနဲ့ အခွားသရုပျပေါငျးမြားစှာနဲ့ အတူပါဝငျသရုပျဆောငျ ခဲ့ပါတယျနျော။ အဲလကျဈအုနျးက ယနမှေ့ာ “လူတိုငျးက ကိုယျ့အတှကျ အရေးကွီးတဲ့အရာကျု အမွဲဦးစားပေးမှာပဲ 🖤 မငျးအတှကျကော ကိုယျကအရေးကွီးတဲ့ သူဖွဈ ခဲ့လား ဖွဈနလေား ဖွဈလာမှာလား!? 🖤” လို့ဆိုထားပါတယျ။ လတျတလောမှာ အဲလကျဈအုနျးတဈယောကျ Not Copyrighted Fashion Show အခမျးနားပှဲကို တကျရောကျတဲ့ အမိုကျစား Fashion ပုံရိပျတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ အဲလကျဈက Fashion တှကေို စတိုငျကကြဝြတျလေ့ ရှိတာကွောငျ့ မိနျးကလေးတိုငျး ဖကျရှငျကအြောငျ ဘယျလိုဝတျဆငျ သငျ့လဲဆိုတာ သိရှိဖို့အတှကျ သူမရဲ့ ဝတျဆငျပုံတှကေို လလေ့ာလြှငျ ပိုအဆငျပွလေိမျ့မယျ ထငျပါတယျနျော။ အနုပညာရှငျ တှရေဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှကေို သိရှိခံစားနိုငျအောငျလို့ ဇီးကှကျ Page လေးကို Like လုပျထားဖို့ ပွောခဲ့ပါရစနေျော .….……။
အမိုက်စား fashion နဲ့ အသည်းယားဖွယ်အပြုအမူလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုရတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာသည့် 1955 “OXFORD” LAND ROVER The Last Overland: စကာင်္ပူမှ လန်ဒန်သို့ မိုင်ပေါင်းတစ်သောင်း ခရီးကိုကျော်ဖြတ်၍ သမိုင်းပြန်လည်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနား
အဖြူရောင်သတိုးသမီးဝတ်စုံလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကြွေဆင်းသွားစေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ၀တ်မှုံရွှေရည်
တစ်နေ့တစ်ခြား လှလာပြီး အနုပညာအလုပ်တွေပြန်လည် လုပ်ကိုင်လာတဲ့ မင်းသမီးလေး သွန်းဆက်
မီးပန်းဖောက်ဖို့အတွက် ကလေးလေးလိုပျော်ရွှင်နေတဲ့ အဆိုတော် ပိုပို